Izinzuzo zeMatte Black Donsela phansi ompompi bekhishi-oompompi basekhishini, okugcwalisa imbiza, oompompi bokugeza
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Izinzuzo zeMatte Black Pull Down Ikhishi Lompompi
Izinzuzo zeMatte Black Pull Down Ikhishi Lompompi
2020 / 10 / 28 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 1034 0
Isici sokudonsela phansi kompompi basekhishini siba umkhuba okhulayo kulezi zinsuku. Ikakhulukazi uma sikhuluma Matte Black Donsela phansi Ikhishi Lompompi ukubukeka kwayo okulula nokubukeka kahle akusimangazi. Isiza kakhulu ukuthuthukisa umsebenzi wokugeza izitsha kanye nokuqoqa ikhishi lakho.
Ingatholakala kokusebenziseka kalula ikakhulukazi uma uhlala udinga izimbiza zokulayisha ezihlala endaweni esetshenziswayo noma endaweni yokulungiselela ukudla. Ungakwazi ukugcwalisa kahle ujeke esitsheni uma uthanda, ngaphandle kokusebenzisa noma yiluphi uhlobo lwamathuluzi angeziwe. Ake sikhanyise ngokwengeziwe ngezinzuzo ongazithola kulolo hlobo lwesakhiwo sompompi ekhishini lakho.
Izinzuzo zompompi wokudonsela phansi
Odonsa phansi ekhishini ompompi yilabo abanekhanda lokukhipha elisuswayo elixhunywe kwipayipi elidlula emzimbeni wompompi. I-hosepipe imvamisa isekelwa ngamabhere ahlukile ngaphakathi kwesikhafu. Benza umsebenzi wepayipi hose ucishe ubushelelezi. Ububanzi obukhulu be Isikebhe esimnyama ekhishini kusuka kumagama emikhiqizo asebenza kahle kakhulu analezi zici asiza abantu ukwenza imisebenzi yabo yokupheka ibe lula.
Kube nezinhlobonhlobo zezithiyo ekwenzeni le mfanelo isebenziseke. Kwaqondwa ngokushesha ukuthi umpompi lapho ikhanda lesifutho lingahlali ngokuqinile endaweni yalo lapho lingasetshenziswa kuyisicefe esikhundleni sokwenza ngcono. Umsebenzi omkhulu wenziwe ngabenzi bamakhompiyutha abahamba phambili ekhishini ukuthola indlela engcono kakhulu yokuthi ikhanda lesifutho lingalondolozwa kanjani ngokuphepha ethekwini.
Yikuphi okukufanele kakhulu?
Kodwa-ke ukwazisa okuhle kakhulu kufanele kunikezwe kulabo ompompi bendawo yekhishi abadonsela phansi abasebenzisa idokodo lekhanda likazibuthe. Endaweni yasekhishini ompompi balolu hlobo, odonsa abaqinile bahlanganiswe esikhumulweni semikhumbi kanye nasekhanda lokufafaza uqobo. Lolu hlelo lunikeza ngokuchofoza okuyinkimbinkimbi lapho ikhanda lesifutho libuyela endaweni yalo. Ukubhalisa kwakho cishe kungatholakali, futhi futhi akukho ukuphuma futhi akukho okulengayo. Ikhanda lingasuswa ngokudonsa okuncane; kodwa-ke, futhi kungcono kakhulu ukuyiguqula kancane kuze kube yilapho odonsa behlukile.
Kungani ukhetha ukudonsa phansi?
Ithephu enekhanda lokudonsa phansi lokudonsa noma induku imvamisa iyindlela ethandwayo ngaphezu kompompi onesifutho esihlukile. I-initial ayifuni ukuvulwa okungeziwe kokusetha, futhi ukusetshenziswa akunazinkinga eziningi kunikezwe ukuthi kuncane kakhulu ukubhekana nento eyodwa kune-2.
Kunemisebenzi ehlukahlukene ehlukahlukene ezindaweni zokupheka ezisebenza kakhulu ezisebenzisana nesici sokudonsela phansi ngendlela enhle. Izinga lokuthinta lokuzwela limane nje yisibonelo esisodwa. Ungayisebenzisa ngokuthinta okulula ngenkathi usebenza ngenduku.
Kunezinhlobonhlobo eziningi zalezi mpompi zekhishi ezitholakala emakethe; okumele ukwenze nje ukukhetha eyodwa ngokwesabelomali sakho nendawo. Uma usadidekile ngokukhetha okulungile, ungaxhumana nomqambi wakho wangaphakathi ukuthola iseluleko sochwepheshe.
Edlule :: Hlobo Luni Lombhobho Wokucima Engiwufunayo Ekhishini Lami? Olandelayo: Ungayifaka Kanjani I-Faucet Yekhishi?